Banokubulawa Central lwemithambo Catheter Kit Manufacturers | I-China i-Disposable Central Venous Catheter Kit Factory kunye nabaxhasi
Ukulahleka kweCentral Venous Catheter Kit (itreyi encinci)
Ukuba ufuna ukhathalelo ixesha elide, unokufumana into ebizwa ngokuba yicatheter esembindini. Ikwabizwa ngokuba ngumgca ophakathi. Umgca we-CVC ikwayityhubhu encinci, kodwa inde kakhulu kune-IV yesiqhelo. Ngokuqhelekileyo ingena emthanjeni omkhulu engalweni okanye esifubeni. Ikhithi ye-catheter ye-venous central ine-catheter ye-venous central kunye nezinye iindawo zokusetyenziswa kweklinikhi.